အပ်စိုက်ကုထုံး - Shijiazhuang Yiling ဆေးရုံ
TCM 5000 နှစ်ကသမိုင်းထက် ပို. ရှိပါတယ်, နည်းလမ်းများကုသအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
အပ်စိုက်ကုထုံး TCM အတွက်အခြေခံကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အစဉ်အလာအပ်စိုက်ကုထုံးမှာ acupuncturist အသုံးပြုတဲ့အစဉ်အလာအရသိရသည်တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုစေရန်လူနာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မေးမြန်းသဖြင့်ဆက်ဆံဖို့ညွှန်ပြပေးသောဆုံးဖြတ်သည်။
အပ်စိုက်ကုထုံး acuneedles နှင့် moxa ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအချို့ acupoint သို့ filiform အပ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည်, တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ချည်ငင်, တောက်, ဒါမှမဟုတ်ထရွေ့လျားခြင်းနှင့်အရေပြားမှဆွေမျိုးဆင်းအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများအတွက်ကြိုးကိုင်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ moxa နည်းလမ်းချမ်း tempering နှင့်အပူ၏ဆွခြင်းအားဖြင့်ရောဂါထိန်းညှိ, တစ်ဦးအချို့သော acupoint အတူအသားအရေ fumigate မှမီးလောင်ရာ moxa အသုံးပြုနေသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါများအမြင်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောကုထုံးက်ဘ်ဆိုက်များကွဲပြားခြားနားသောကုထုံးရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ကုထုံးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်ရွေးချယ်ထားသည်။ ဦးရေပြားအပ်စိုက်ကုထုံး, လက်အပ်စိုက်ကုထုံးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပ်စိုက်ကုထုံး၏ဘုံအမျိုးအစားများ,
ဦးရေပြားအပ်စိုက်ကုထုံး, ဦးရေပြားနှင့်စပ်လျဉ်း reflexological ထည့်သွင်းစဉ်းစားအပေါ်အခြေခံသည်။
အဆိုပါ acupoint နှင့်ရွေးချယ်သောနည်းစနစ်အပေါ်အခြေခံပြီး effect, တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်၏အရည်အသွေးနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသော acupoint, ကွဲပြားခြားနားသောအတိမ်အနက်, ကွဲပြားခြားနားသောထောင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ် (ကဲ့သို့အဘယ်အရာကိုအကြိမ်ရေ "အသီးအနှံကိုဆွတ်", "လှုပ်" သို့မဟုတ် "တုန်လှုပ်" အဘယ်အရာကိုဦးတည်ချက်) ကိုကုသအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
သက်ရောက်မှုကုသထောင်ပေါင်းများစွာ၏အပ်စိုက်ကုထုံးကိုအောင်မြင်စွာဘုံနာကျင်မှု, အနိမ့်ကိုပြန်နာကျင်မှု, ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်, အဆစ်, အခြားပူးတွဲနာကျင်မှု Post-စစ်ဆင်ရေးနာကျင်မှု, ပျို့ခြင်း, ကင်ဆာကုသမှုလိုဆကျဆံကိုကူညီနိုင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ကြသည်။
ယနေ့ခေတ် TCM ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတူကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာအထူးနှင့်လွတ်လပ်သောကုသမှုအဖြစ်အပ်စိုက်ကုထုံးယူကြပြီ။
ကင်ဆာကုသမှုစဉ်အတွင်းကြွက်သားကျုံ့, ဒူလာ, fibromyalgia, မော်တာအာရုံခံဆဲလျရောဂါ, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ, ဆီးချို, သွေးတိုး, အပ်စိုက်ကုထုံးဟာ ပို. ပို. အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍကစားခဲ့သည်။
ရောဂါ & အီးမေးလ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး